Espaina : Tsy Maintsy Mandoa Ny Hetrany Ve Ny Eglizy? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Septambra 2012 12:07 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Italiano, Português, Ελληνικά, русский, Español
@piluquita: Misy afa-mikajy ve hoe firy ny fitarafana nono [mammographies] mety ho voavidy raha mandoa ny IBI ny fiangonana ?
@Tweets_Platino: mey : “Tsy hisy na inona na inona hovidiana amin'ny hetran-trano sy tany 3 miliaran'ny fiangonana.” Jona : Nosintonin'ny fitondrana ny FANAFODY ahafahana mitahiry vola 4,4 miliara.
Miaro tena amin'ireo fiampangana ireo ny Vaomiera Episkopaly Espaniola. Manazava teboka isan-karazany ao amin'ny tranonkalany ny lahatsoratr'i Isidro Catela :
Misy ireo fanorenana izay tsy voafaritra handoa hetran-trano (IBI). Ho an'ny Fiangonana, ny fifanarahana no mametraka tsy mampandoa hetra ny trano natao manokana ao amin'ny asan'ny fiangonana (fahasalamana fototra, fanabeazana, asam-birao, hopitaly…). Ny lalànan'ny Fanampiana no tsy mampandoa IBI ny tranona vondrona na fikambanana tsy mikatsaka tombontsoa, ankoatra ireo manana asam-pihariana tafiditra amina fandoavan-ketra hafa. Ny lahatsoratry ny elEconomista.es, amin'ny fandraisana ho ohatra ny fanapahan-kevitry ny ao Zamora no ahafahana manavaka ireo fahasamihafana ireo.
Ny zava-misy, ny ankamaroan'ny asam-pamonjena (fiantràna) ataon'ny Eglizy katolika dia saiky amin'ny alalan'ny Cáritas avokoa. Avoakan'ity fikambanana ity ao amin'ny tranonkalany ny tatitra ara-bola ambangovangony, mba ho hitan'ny rehetra. Samy mahita ny isa marina avy amin'io ny rehetra, tsy voatery hiankina amin'ny lazain'ny mpiaro na mpanenjika ny fiangonana. Tsikaritra eo fa sombiny kely avy amin'ny tahirim-bola eo ampelatanan'ny Cáritas no avy amin'ny Fiangonana amin'ny maha-rafitra azy, izay ataony amin'ny alalan'ny Tahiry Iraisan'ny Diosezy sy ny Fikambanana Dioseziana.